नेपालमा चाँडै इलेक्ट्रिक पासपोर्ट वितरण गरिने ! - Grameen Khabar
नेपालमा चाँडै इलेक्ट्रिक पासपोर्ट वितरण गरिने !
२०७७ चैत्र ६, शुक्रबार ११:०८
काठमाडौँ, ६ चैत । नेपालमा विद्युतीय राहदानी चाँडै वितरण गरिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने गरी तयारी थालेको छ । विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले हाल कायम रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विस्थापित गर्दै नेपालले विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउन लागेको बताए । “विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप्स तथा बायोमेट्रिक परीक्षण (औँठा छाप)सहितको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था रहने भएकाले निकै विश्वसनीय रहन्छ, ” उनले भने ।
ठेक्का सम्झौताअनुसारको विद्युतीय राहदानीको डिजाइन तयार भइसकेको छ । डिजाइन यसै महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसलगत्तै छपाइका लागि मेसिन मगाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ । फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस कम्पनीले राहदानी छपाइको जिम्मा लिएको छ । नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार अनुमानित तीन अर्ब रुपियाँको लगानीमा २० लाख प्रतिराहदानी छपाइ हुनेछ ।
विभिन्न कारणले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनामा ढिलाइ भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयमा विभाग आफैँले विद्युतीय राहदानी छपाउन फेरि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार आवेदन दिएकामध्ये उत्कृष्ट मानिने कम्पनीसँग सन् २०२० डिसेम्बर २३ का दिन विभागले औपचारिक सम्झौता गरेको थियो ।